दार्चुला घटना : घटनास्थलमै पुग्यो सरकार, एक्सन लिने तयारी ! — Imandarmedia.com
दार्चुला घटना : घटनास्थलमै पुग्यो सरकार, एक्सन लिने तयारी !
दार्चुला : दार्चुला घटनाको छानविन गर्न देउवा सरकार एक्सनमा उत्रिएको छ । तुइन तर्दै गर्दा एसएसबीका जवानले डोरी फुकालेर नेपाली युवा बेपत्ता भएको घटना छानबिन गर्न काठमाडौंबाट आएको टोली एसएसबीकै सुरक्षामा बिहीबार भारतपट्टिको घटनास्थल पुगेको छ । सात दिनपछि टोली घटनास्थल पुगेको हो ।
गत १५ साउनमा सदरमुकाम खलंगा आउन तुइन तर्दै गर्दा एसएसबीले डोरी फुकालिदिएपछि व्याँस गाउँपालिका– २ मालगाउँका जयसिंह धामी महाकालीमा बेपत्ता भएका थिए । घटना छानबिन गर्न सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको नेतृत्वमा गठन गरेको टोली मंगलबार साँझ दार्चुला पुगेको थियो । बिहीबार बिहान टोली सीमावर्ती भारतीय बजार धार्चुला हुँदै घटनास्थल गस्कु–मालघाट पुगेको हो ।
छानबिन टोलीलाई धार्चुलाबाटै एसएसबीले सुरक्षा दिएको थियो । एसएसबीको ११ नम्बर बाहिनी डिडीहाटका सिओ महेन्द्रप्रताप सिंह नेतृत्वको टोली उनीहरूसँगै थियो । दार्चुलाबाट सशस्त्र प्रहरीका एसपी नरेन्द्र बम र नेपाल प्रहरीका डिएसपी मनोहरप्रसाद भट्ट पनि टोलीसँगै घटनास्थल गएका थिए ।
टोलीले तुइन बाँधिएको रूखको नापजाँच लिएको छ । यसअघि जिल्लाबाट खटिएको अनुसन्धान टोलीले दिएको विवरणअनुसार घटनास्थलको निरीक्षण गरिएको टोली सदस्य तथा दार्चुलाका सहायक सिडिओ ज्योत्सना भट्ट जोशीले बताइन् ।
छानबिन टोली घटनास्थल पुग्दा पारि नेपालपट्टि भने स्थानीय बासिन्दा र विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले नाराबाजी गरेका थिए । ‘अपराधमा संलग्न एसएसबीसँगै गएर अनुसन्धान गर्नुको औचित्य नभएको’ भन्दै उनीहरूले तुइन लगाइएको ठाउँमै आएर प्रदर्शन गरेका थिए । पारिपट्टिबाट राष्ट्रिय झन्डा देखाउँदै उनीहरूले नेपालतर्फ आएर पनि अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् ।
महाकाली तर्न नेपालतिर काठको खाँबो गाडिएको छ भने भारततर्फ टुडीको रूख छ । तर, अहिले दुवैतर्फ तार छैन । एसएसबीले रूखबाट तार फुकालेको हो वा काटेको हो भन्ने देखिने प्रमाण केही नभएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । महाकाली नदी वारिपारि झन्डै ४५ मिटरको दूरी छ ।
दार्चुलाकी सहायक सिडिओ जोशीले छानबिन टोली घटनास्थल भएको ठाउँबाटै फर्किएको बताइन् । ‘भारतीय एसएसबीले सहजीकरण मात्रै गरिदिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘त्योबाहेक अन्य विषयमा छलफल भएको छैन ।’
विप्लव नेतृत्वको नेकपाका जिल्ला सचिव सुवास मल्लले सरकारी टोलीले छानबिनको नाटक मात्रै गरेको आरोप लगाए । ‘एसएसबीले नै घटना गराउने अनि उनीहरूसँगै गएर अनुसन्धान गर्नुको कुनै औचित्य छैन,’ उनले भने, ‘आफ्नो भूमिमा पाइला नटेकेर एसएसबीकै इसारामा प्रतिवेदन बनाउन यो नाटक गरिएको हो । त्यसको जनताले नै विरोध गरेका हुन् ।’
सहायक सिडिओ जोशीले भने नेपालतिरबाट पनि प्रमाण संकलनको काम भइरहेको बताइन् । ‘समितिका संयोजकज्यूले नेपालपट्टि पनि जानुपर्छ भन्नुभएको छ, तर बाटोको अवस्था राम्रो छैन । हेलिकोप्टरको व्यवस्थापन गरेर भए पनि पुग्नुपर्छ भन्ने आशय छ, तर टुंगो लागिसकेको छैन । जाने–नजाने संयोजकज्यूको निर्णयअनुसार हुने हो,’ उनले भनिन् ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव गौतम नेतृत्वको छानबिन समितिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका एआइजी पुरुषोत्तम कँडेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक हुतराज थापा, सशस्त्र प्रहरीका एसएसपी सुरेशकुमार श्रेष्ठ र दार्चुलाका सहायक सिडिओ जोशी सदस्य छन् । दार्चुलाबाट टोलीसँगै सशस्त्र प्रहरी ४४ नम्बर गणका गणपति नरेन्द्र बम र नेपाल प्रहरीका डिएसपी मनोहरप्रसाद भट्ट पनि घटनास्थल पुगेका थिए ।
घटनास्थलमा क्यामेरा लैजान रोक
समाचार संकलनका लागि गएका पत्रकारलाई एसएसबीले घटनास्थलमा क्यामेरा लैजान रोक लगाएको छ । सुरुमा घटनास्थल जानै रोकिरहेको एसएसबीले अन्तिममा नेपाल–भारत जोड्ने झोलुंगेपुलबाट क्यामेरा नलगीकन मात्रै जान दियो ।
बिहान ९ बजे छानबिन टोली घटनास्थलतर्फ हिँडेपछि दार्चुलाबाट मानव अधिकारकर्मी र पत्रकारको टोली पनि छुट्टै गाडी लिएर गएको थियो । तर, धार्चुलाबाट ६ किलोमिटर माथि दोबाट भन्ने ठाउँमा एसएसबीले उनीहरूलाई घटनास्थल जान नमिल्ने भन्दै फर्काएको पत्रकार महासंघ दार्चुलाका अध्यक्ष कृष्णसिंह धामीले बताए ।
पछि नेपाली सुरक्षाकर्मीसँगको समन्वयमा दिउँसो मात्रै पत्रकारहरूलाई घटनास्थल जान दिइयो, तर क्यामेरा लग्न दिइएन । विनाक्यामेरा गएका पत्रकारलाई पनि एसएसबीले तिगरमा फेरि केही समय रोकेको थियो ।
प्रत्यक्षदर्शीलाई प्रहरी सुरक्षामा गाउँ पठाइयो
स्थानीय प्रशासनले बयानका लागि सदरमुकाम झिकाइएका प्रत्यक्षदर्शी कल्यानसिंह धामी, विक्रम रंकोली र अनिता धामीलाई बिहीबार गाउँ फिर्ता पठाएको छ । प्रहरी सुरक्षामा नेपालकै बाटो भएर उनीहरूलाई गाउँ पठाइएको हो ।
गत १८ साउनमा सोधपुछका लागि भन्दै उनीहरूलाई दुईजना प्रहरीको निगरानीमा सदरमुकाम ल्याइएको थियो । गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन टोलीले बुधबार दिनभरि उनीहरूसँग बयान लिएर राति अबेर आफन्तको जिम्मामा लगाएको थियो ।
तीनैजनालाई बिहीबार बिहान ५ बजे खलंगाबाट गाउँ हिँडाइएको थियो । दस्तखत गर्न छुटेको भन्दै प्रहरीले उनीहरूलाई तिमुरपाटामा रोकाएर दस्तखत गराएको थियो । खलंगामा रहँदा उनीहरूलाई पत्रकार र मानव अधिकारकर्मीसँग भेट्न रोक लगाइएको थियो ।
प्रहरीले उनीहरूलाई गाउँ लैजाँदा एक–दुई अन्य स्थानीय पनि सँगै थिए, तर उनीहरूसँग सम्पर्क गर्न दिइएन । प्रत्यक्षदर्शी र स्थानीयलाई छुट्टाछुट्टै हिँड्न लगाइएको सँगै गएका एक स्थानीयले बताए ।